Mbappé oo shuruud kaga dhigay PSG inay sameyso saxiixyada saddex xiddig si uu u sii joogo kooxda – Gool FM
Dajiye April 2, 2020
(Paris) 02 Abril 2020. Xiddiga reer France iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé ayaa shuruud ku xiray maamulka kooxdiisa taasoo ah inay la soo saxiixdaan saddex ciyaaryahan suuqa xagaaga ee soo socda, si uu u sii joogo garoonka Parc des Princes.
Kylian Mbappé ayaa lala xiriirinayay inay macquul tahay inuu ka tagayo safka kooxda Paris Saint-Germain, maadaama ay xiiseynayaan adeegiisa kooxo badan ee qaarada Yurub ah oo ay ugu horeyso Real Madrid.
Wargeyska “Don Balón” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Kylian Mbappé uu doonayo in saraakiisha PSG ay u dhaqaaqaan la soo saxiixashada laacibka reer Masar iyo kooxda Liverpool si uu ugu ciyaaro garoonka Parc des Princes xilli ciyaareedka soo socda.
Wargeyska ayaa wuxuu intaas ku sii daray in liiska xiddigaha uu doonayo Mbappé uu ku jiro xiddiga amaahda ku joogo Borussia Dortmund, isla markaana ay milkiyadiisu leedahay kooxda Real Madrid ee Achraf Hakimi.
Halka magaca seddexaad uu yahay xiddigaha da’ada yar ee reer England iyo kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho, kaasoo dhowaan lala xiriiriyay inuu ka tagayo Borussia, maadaama ay wada xiiseynayaan dhamaan kooxaha waaweyn ee horyaalka Premier League.